Muwaadin Soomaaliyeed oo tooreey lagu dilay dalka Koonfur Afrika - Awdinle Online
Waxaa Gudaha dalka Koonfur Afrika dhaawac tooreey oo loo geystay ugu geeriyooday Ibraahim C/llaahi Maxamed oo kamid ahaa Soomaalida Ganacsi ahaan u tegay dalkaas.
Marxuumka ayaa waxaa la sheegay in Maalmo ka hor ay tooreey Wadnaha kaga dhufatay Haweeneey ay murmeen, kaddib khilaaf soo kala dhex-galay, waxaana uu ku geeriyooday Isbitaal ku yaalla degaanka Kalaamos oo ku dhow Tuulada Paarl ee Magaalada Cape Town.
Qaar kamid ah ehellada Marxuumka ayaa xaqiijiyay geeridiisa, waxaana ay sheegeen in dhaawac culus oo ka gaaray Wadnaha uu u geeriyooday, iyada oo Haweeneydii falkaasi ka dambeeysay ay xireen Ciidamada Booliska dalka Koonfur Afrika.
Dalka Koonfur Afrika oo kamid ah wadamada Afrika ayaa waxaa kusii kordha dilalka muwaadiniinta Soomaaliyeed loo geysto xilliyada sanad dhammaadka, iyadoo aanay muuqan Dadaalo dhab ah oo ay arrintan ugu istaageen Masuuliyiinta Safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Koonfur Afrika iyo laamaha Amniga dalkaas.
Previous articleMadaxweynihii Maamulka Hir-Shabeelle oo ku dhawaaqay in uu is casilay
Next articleKhudbadaha musharixiinta Guddoonka Baarlamaanka Hir-Shabeelle oo bilaabanaya